नागरिकलाई चिसोबाट जोगाऊ | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
नागरिकलाई चिसोबाट जोगाऊ
२०७१ मंसिर २९, सोमबार ०१:५९ गते
मंसिरको दोस्रो सातादेखि नै देखा परेको शीतलहरबाट पूर्वी तथा पश्चिमी तराईको जनजीवन कष्टकर बनिरहेको छ । चिसो बढेपछि न्यानो कपडा नपाएर सयौँ बालबालिका बिरामी परिरहेका छन् । अधिकांश बालबालिकामा बान्ता हुने, टाउको दुख्ने र निमोनियाको समस्या देखा परेको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिरामी बालबालिकाको उपचारमा समेत समस्या परेको छ । अघिल्ला वर्षहरुभन्दा एक महिनाअगावै शीतलहर चल्न थालेपछि यस्ता समस्या दिनहँु बढिरहेको छ । शनिबारदेखि पहाडी र उच्च हिमाली भेगमा हिमपातसमेत हुन थालेपछि कर्णाली क्षेत्रका नागरिकको जनजीवन नराम्ररी प्रभावित भइरहेको छ । नेपालगन्जमा दुई सातादेखि घाम लाग्न छाडेपछि त्यहाँको जनजीवन कष्टकर बन्न पुगेको छ ।
हरेक वर्ष उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपातले गर्दा मानिसको दैनिकीमा समेत असर पुगेको छ । यस क्षेत्रका वृद्धवृद्धा र बालबालिका प्रभावित भइरहेका छन् । जाडोमा हिमपातले जनजीवन अस्तव्यस्त भएपछि हिमाली क्षेत्रका विद्यालयहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । हिमाली क्षेत्रमा बिहानको अधिकतम तापक्रम ९ र न्यूनतम माइनस ३ सम्म तल झरेको छ । डोल्पा, मुगु, जुम्ला, कालिकोटजस्ता जिल्लामा बाक्लो हिमपातले गर्दा यातायातसमेत ठप्प हुन पुगेको छ । उता, पूर्वी तराईका जिल्लामा शीतलहर र चिसो सिरेटोले गर्दा वृद्धवृद्धा र बालबालिकाहरुको जीवन कष्टकर भएको छ । हरेक वर्ष शीतलहर चलेपछि न्यानो कपडाको अभावमा दर्जनौँ वृद्धवृद्धा र बालबालिकाको अकालमा ज्यान जाने गरेको छ । जाडोमा कठ्याङ्ग्रिएर जीवन गुमाउनुजस्तो विडम्बना अरु केही हुन सक्दैन ।
राज्यले आमनागरिकको जीवन सुरक्षा गर्न सकेको छैन । राज्यबाट प्राप्त हुने न्यूनतम आधारभूत सेवा त परै जाओस्, जाडोबाट जोगाउने पहलसम्म गर्न नसक्नु राज्यको कमजोरी हो । विपन्न, गरिब, सुकुमबासी, बाढीपीडितजस्ता आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकहरुको जीवन कष्टकर बनिरहँदा सरकार मौन रहनु एउटा अपराध हो । चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर मृत्यु वरण गर्न पुगेका व्यक्तिको परिवारलाई राहत दिन तयार हुने सरकारले उसको जीवन बचाउनतर्फ ध्यान दिएको छैन । न्यानो लुगा, कम्मल र कतिपय स्थानमा आगो ताप्ने व्यवस्था मिलाउन सके अनाहकमा नागरिकहरु चिसोकै कारण मर्ने थिएनन् । गरिब हुनु, विपन्न हुनु र प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित हुनु नागरिकको अपराध होइन । यस्ता पीडित नागरिकलाई बचाउने पहिलो दायित्व सरकारको हो ।
त्रिपालमुनि रात काट्न विवश नागरिकको चीत्कार यो सरकारले कहिले सुन्ला ? नाङ्गा बालबालिकाको आङमा न्यानो लुगाले ढाक्ने व्यवस्था राज्यले कहिलेसम्म गर्ला ? विपन्न नागरिकको आर्तनाद, पीडालाई कहिले सम्बोधन गर्ला ? यतिखेर यस्ता प्रश्नहरु बोकेर बाँच्दैछन्, आमनागरिकहरु । सरकारको उच्च तहमा रहेकाहरु करोडौँ राज्यको ढुकुटी खर्चेर लावालस्करका साथ पश्चिमा देशमा गएर उपचार गराएर फर्कन्छन् । तर, गरिब र निमुखाहरु चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर मर्नुपर्ने विवशता हाम्रो मुलुकमा छ । राज्यको यस्तो खाले विभेद कहिले अन्त्य हुन्छ र नागरिकले कहिले अधिकार पाउँछन् ? यतिखेर राज्यको उपस्थिति कहाँ छ भनेर खोज्नुपर्ने भएको छ । लाचार सरकारले यस्ता पीडित नागरिकको मृत्युको खबर सुन्नुअघि नै उपचार र न्यानो कपडा वितरण गरेर नागरिकको जीवन बचाउनु जरूरी देखिएको छ ।